Shina 5263 3-Stage eo ambanin'ny Sink Tankless Household Reverse Osmosis System orinasa sy mpanamboatra | Filter Tech
5263 3-Stage eo ambanin'ny Sink Tankless Houseware Reverse Osmosis System
Ny rafitra dia afaka manala ny ankamaroan'ny loto toy ny TDS, metaly mavesatra, bakteria ao anaty rano fantsakanao.
Ny fitaovana plastika misy ambaratonga ara-tsakafo dia miantoka rano fisotro madio sy tsy voaloto.
Ny cartridge sivana azo ampiasaina indray mandeha dia mamonjy ny fotoana fanadianao ary hisorohana ny fandotoana faharoa.
Cartridge sivana feno 2 amin'ny 1, tahirizo ny habaka ao ambanin'ny tototra ary mora soloina ny singa.
Sivana ny fampisehoana fiainana ary avereno, jereo mora foana ny fotoana hanovana ny sivana.
Fanadiovan-drano RO sarobidy ho an'ny trano
Ny filtration gradient 3-dingana dia mamokatra rano madio sy matsiro mahitsy mankany amin'ny fantsom-patanao any an-dakozia, mety kokoa sy sariaka ara-tontolo iainana noho ny rano feno tavoahangy. Afaka mankafy rano madio kokoa ianao, cubes misy ranomandry madio, kafe vaovao ary sakafo matsiro tsara kokoa.
Fampisehoana amin'ny fotoana tena izy namboarina
Ny mpandio rano RO marani-tsaina dia manana fampisehoana amin'ny fotoana tena izy izay manampy anao hanara-maso ny kalitaon'ny rano amin'ny fomba mety, toy ny TDS amin'ny rano voasivana, ny mari-pamantarana ny fanovana sivana, sns., Endri-javatra tena marani-tsaina izay hanampy amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa anao.
Famoronana tsy misy tank
Ity rafitry ny osmosis mivadika ity dia miaraka amin'ny vatana manify indrindra ary ny fahaizany miovaova dia heverina fa mifanaraka amin'ny fomba any an-trano. Tsy toy ny ankamaroan'ny singa RO, misy endrika tsy misy tanky ary afaka mamorona efitrano lakozia mety tsara ho anao.
Volavola mihodina sy misintona
Miaraka amin'ny fihodinana tsotra, ny fanovana sivana an'ity sivana rano RO ity dia azo atao mora foana tsy misy fihoarana na famoahana rano. Tsy mila mamono ny rano miditra ianao na manainga ilay fitaovana toy ny fomban-drazana.
Fametrahana sy fanoloana mora
Ity sivana rano RO ity dia miaraka amin'ny sivana fampiasa amin'ny fomban'olom-bolo, tsotra ampy ho anao hametrahana sy hisolo sivana araka izay itiavanao azy. Ny patantin'ny teknolojia fijanonan'ny rano bi-directional izay natao manokana ho an'ny cartridge sivana dia fanampiana lehibe amin'ny fisorohana ny rano mivoaka avy amin'ny cartridge, ka tsy mila mamono ny rano miditra ianao rehefa manodina azy.
Fampisehoana avo lenta miaraka amin'ny dingana 3
Ambaratonga voalohany: CF dia misy PP sy CB. Ny sivana antsanga PP (10-15μm) dia afaka misambotra kôlôdeina, antsanga, harafesina, poti lehibe ary loto maloto mihantona; Ny sakana karbonika (5-10μm) dia afaka manala klôro residual (-85%) sy COD (-25%);
Dingana faha-2: ny membrane RO (0,0001μm) dia afaka mitsofoka ny ion mafy orina toy ny metaly mavesatra, ary ny zavamiaina bitika toy ny bakteria coliform. Ny tahan'ny famongorana dia> 95%. Manana 75G, 400G, 500G ary 600G isika hisafidianana. Samy misy Toray sy Dow.
Ambaratonga faha-3: ny sakana karbônina post (10-15μm) dia afaka manala ny chôlôlôly sisa tavela, ny tetrachloride karbonina, ny metana miaraka amin'ny taham-panesorana hatramin'ny 85% mandritra ny dingana rehetra, ary afaka manala loko, fofona ary tsiro ratsy amin'ny rano. Ny karbaona bakteria dia tsy voatery hisorohana ny fitomboan'ny bakteria.
zavatra RO3A-75E / M
Taham-pivoahana 0.2L / min （75G）
lafiny RO3A 445 × 130 × 420mm
Ny mari-pana miasa 5-38 ℃
Fanerena miasa 0.1-0.4Mpa
fifandraisana Fidirana: 3/8 ″ fantsona PE water rano voadio sy rano fako: 1/4 ″ fantsom-bozaka PE
Media sivana CF (PP + mpanakana ny ambaratonga CB) + RO + CB (misy ny bakteria)
Endri-javatra - E (kinova ara-toekarena) Sivana ny seho mandritra ny androm-piainana ary avereno; fiarovana ny ora fanampiny; faucet tsotra
Endri-javatra - M (kinova afovoany) Sivana ny seho mandritra ny androm-piainana ary avereno; fiarovana ny ora fanampiny; faucet marani-tsaina; Fampisehoana TDS; fiarovana ny famoahana rano; flushing maranitra; fomba fialantsasatra
Teo aloha: 5262 3-Stage eo ambanin'ny Sink Domest Reverse Osmosis System
Manaraka: 5264 3-Stage eo ambany rafitra milomano miverimberina amin'ny Osmosis
Rafitra fanivanana rano Osmosis tsara indrindra
Rafitra Osmosis mifamadika
Rafitra Osmosis miverimberina ao an-trano
Rafitra Osmosis miverimberina amin'ny trano feno
5265 2-Stage eo ambanin'ny rendrika ao an-trano Rever Compact ...
5268 2-Stage eo ambany rendrika an-trano Osmos ...
5264 3-Stage eo ambanin'ny rendrika an-trano Osmos ...
5210/5211 3-Dingana eo ambanin'ny rendrika ao an-trano ...
5262 3-Dingana eo ambanin'ny Sink Domestic Reverse Osmosi ...
Fanadiovan-drano ho an'ny trano iray manontolo, Sivanin'ny rano ao an-trano, Fitaovana fitsaboana rano, Rafitra fanivanana rano Osmosis tsara indrindra, Cartridge fanoloana rano, Rafitra Osmosis miverimberina amin'ny trano feno,